Miaina ny tena fahalalahana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-04 > Miaina ny tena fahafahana
Tsy misy dikany amin'ny tantara fa ny tontolo Tandrefana dia nankafizin'ny fitsipi-piainana avo lenta toy izany izay omen'ny maro ankehitriny. Miaina amin'ny fotoana iray efa mandroso be tokoa ny teknolojia ka afaka mifandray isika amin'ny olon-tiantsika manerana an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fampiasana smartphone. Afaka manana fifandraisana mivantana amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana na namana amin'ny fotoana rehetra amin'ny telefaona isika, mailaka, WhatsApp, Facebook na amin'ny alàlan'ny antso an-tserasera.
Alao sary an-tsaina ny mety ho tsapanao raha nesorina daholo ireo zava-bita ara-teknika ireo ka voatery nipetraka irery tao amin'ny sela kely kely ianao nefa tsy nifandray tamin'ny tontolo ivelany? Ity dia tranga toy ny voafonja izay voahidy ao amin'ny efitra figadrana. Any Etazonia, misy ireo fonja antsoina hoe Supermax izay novolavolaina manokana ho an'ireo mpanao heloka be indrindra mampidi-doza, izay hidiran'ny voafonja ao am-ponja tokana. Nandany 23 ora tao amin'ny sela izy ireo ary nandany adiny iray tany ivelany. Na any ivelany aza, dia mivezivezy toy ny ao anaty lava-bato lehibe ireo mponja ireo mba hidio rivotra vaovao. Inona no holazainareo raha hitanao fa ao anaty fonja toy izany ny zanak'olombelona ary tsy misy lalana miala amin'izany?
Tsy ao amin'ny vatana ara-batana io fitazonana io, fa ao an-tsaina. Voahidy ny saintsika ary nolavina ny fahalalana sy ny fifandraisana amin'ny tena Mpamorona. Na eo aza ny rafi-pinoanay rehetra, ny fomba amam-panao, ny fomba amam-panao ary ny fahalalana ara-pinoana, dia mijanona ho voatazona hatrany isika. Ny teknolojia dia mety nametraka antsika lalindalina kokoa ao anaty fanokanan-tena mitokana. Tsy manam-petra intsony isika. Na dia eo aza ny fandraisanay anjara amin'ny fiaraha-monina, io fitazonana io dia nahatonga anay hijaly noho ny fahatsapana ho manirery sy ny adin-tsaina lehibe. Tsy afa-mandositra ny fonjanay isika raha misy olona manokatra varavarana ara-tsaina ary manafaka ny fahababoantsika amin'ny ota. Iray monja ny olona izay manana ny lakile amin'ireto lakile ireto izay manakana ny lalantsika mankany amin'ny fahalalahana - i Jesoa Kristy.
Ny fifandraisana amin’i Jesoa Kristy irery ihany no afaka manokatra ny lalana ho antsika hiaina sy hahatsapa ny tanjontsika eo amin’ny fiainana. Ao amin’ny Filazantsaran’i Lioka isika dia mamaky momba ny fotoana nidiran’i Jesoa tao amin’ny synagoga iray ary nanambara fa ho tanteraka amin’ny alalany ny faminaniana fahiny momba ny Mesia ho avy (Isaia 6.1,1-2). Jesosy dia nanambara ny tenany ho ilay nirahina hanasitrana ny torotoro fo, hanafaka ny mpifatotra, hampahiratra ny mason’ny jamba ara-panahy, ary hanafaka ny ampahorina amin’ny mpampahory azy: “Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy sy naniraka Ahy Izy. mitoria ny filazantsara amin’ny malahelo, mba hitory amin’ny mpifatotra mba ho afaka sy hahiratra ny jamba, ary hanafaka ny torotoro fo ho amin’ny fahafahana, ary hitory ny taom-pahasoavan’ny Tompo” (Lioka. 4,18-19). Hoy i Jesosy momba ny tenany: “Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana.” (Jaona 14,6).
Ny tena fahafahana dia tsy avy amin'ny harena, fahefana, sata ary laza. Tonga ny fanafahana rehefa misokatra ny saintsika amin’ny tena tanjon’ny fiainantsika. Rehefa ambara sy tsapa ao anatin’ny fanahintsika lalina izany fahamarinana izany dia manandrana ny tena fahafahana isika. “Ary hoy Jesosy tamin’ny Jiosy izay nino Azy: Raha maharitra amin’ny teniko ianareo, dia ho mpianatro tokoa ka hahalala ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo” (Jaona. 8,31- iray).
Inona no fanafahana antsika rehefa manandrana ny tena fahafahana? Afaka amin’ny vokatry ny fahotana isika. Ny fahotana dia mitarika ho amin’ny fahafatesana mandrakizay. Miaraka amin'ny fahotana, dia mitondra ny vesatry ny meloka koa isika. Ny olombelona dia mitady fomba isan-karazany ho afaka amin’ny heloky ny fahotana izay miteraka fahabangana ao am-pontsika. Na manankarena sy manana tombontsoa toy inona aza ianao dia mitoetra ny fahabangana ao am-ponao. Ny fanatrehana fiangonana isan-kerinandro, ny fivahiniana masina, ny asa fiantrana, ary ny asa fanompoana sy ny fanohanana eo amin'ny fiaraha-monina dia mety hanome fanamaivanana vonjimaika, saingy mbola mitoetra ny banga. Ny ran’i Kristy nalatsaka teo amin’ny hazo fijaliana, ny fahafatesan’i Jesosy sy ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty no manafaka antsika amin’ny tambin’ny ota. “Izy (Jesosy) no ananantsika fanavotana amin’ny rany, dia ny famelana ny fahotantsika, araka ny haren’ny fahasoavany, izay nomeny antsika be dia be amin’ny fahendrena sy ny fahendrena rehetra” (Efesiana). 1,7- iray).
Izany no fahasoavana raisinao rehefa manaiky an'i Jesoa Kristy ho Tomponao sy Mpamonjy anao manokana ianao. Voavela ny helokao rehetra. Ny enta-mavesatra sy ny fahafaham-po izay nataonao dia nanjavona ary manomboka manomboka manova sy miova ianao miaraka amin'ny fifandraisana mivantana sy akaiky amin'ny Mpamorona sy Andriamanitrao. Jesosy manokatra ny varavarana ho anao avy ao an-tranonao ara-panahy. Misokatra ny varavaran'ny fahalalahanao mandritra ny androm-piainanao. Afaka amin'ny fanirianao feno fitiavan-tena ianao izay mitondra fahoriana sy fijaliana aminao. Maro no andevozin'ny faniriana feno fitiavan-tena. Rehefa mandray an'i Jesoa Kristy ianao dia misy fiovana mitranga ao am-ponao izay momba ny laharam-pahamehana ataonao amin'Andriamanitra.
« Koa aza avela hanjaka amin’ny tenanareo mety maty ny ota, ary aza manaraka ny filany. Ary aza manolotra ny rantsambatanareo ho amin’ny ota ho fiadian’ny tsi-fahamarinana, fa atolory ny tenanareo ho an’Andriamanitra toy ny efa maty ka velona indray, ary ny rantsambatanareo ho fiadian’ny fahamarinana. Fa ny ota tsy hanapaka anareo, satria tsy ambanin’ny lalàna ianareo, fa ambanin’ny fahasoavana” (Romana 6,12- iray).
Manomboka hahatakatra hoe fiainana mamita tokoa isika rehefa lasa Andriamanitra no ifantohantsika ary maniry ny hanana an'i Jesosy ho namana sy mpiara-miasa lalandava ny fanahintsika. Mahazo fahendrena sy mazava isika izay tsy mihoatra ny fisainan'ny olombelona. Manomboka mijery ireo zavatra avy amin'ny fomba fijery masina izay manome valisoa tena mahasoa izahay. Manomboka amin'ny fomba fiaina iray izay tsy hoe andevo faniriana intsony isika, fitsiriritana, fialonana, fankahalana, fahalotoana ary fiankinan-doha izay mitondra fijaliana tsy hay fehezina. Misy koa ny fanamaivanana ny enta-mavesatra, ny tahotra, ny tebiteby, ny tsy fandriampahalemana ary ny fitaka.
Avelan'i Jesosy hamoha ny varavaran'ny tranobanao anio. Nanefa ny rany famonjena ianao amin'ny rany. Avia ary mankafy fiainana vaovao ao amin'i Jesosy. Raiso ho toy ny Tomponao, Mpamonjy sy Mpamonjy anao, ary mandia ny tena fahafahana.
nataon'i Devaraj Ramoo